ကိုယျ့ရဲ့ လကျရှိ ဘဝကို အားမရလို့ စိတျကုနျနသေူမြား ဒီပို့လေး ကိုဖတျကွညျ့လိုကျပါ…. – Nyi Ma Lay
“လကျရှိ ကိုယျ့ ဘဝကို အားမရလို့ စိတျကုနျနတေဲ့ အခါ ဒီပို့ကိုဖတျကွညျ့လိုကျပါ”……. ကိုယျ့ဘ ဝကိုယျ ခဈြခငျ လာဖို့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
သူ တို့ဘဝကိုသူတို့ မုနျးတ ယျဆိုတဲ့လူေ တှ ရှိပါတယျ။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာရှိေ နတဲ့အရာေ တှနဲ့ မပြျောရှငျနိုငျကွပါဘူး။အကယျ၍ သငျလ ညျး အဲလိုပဲ ဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ သငျဟာ- ခမျြးသာမှ၊ အောငျမွငျမှ၊ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ အမြားကွီးရမှ၊ နာမညျေ ကျြာကွားမှ၊ ပွီးပွ ညျ့စုံတဲ့ မိသားစုရှိမှ ပြျောရှငျမယျဆိုတဲ့ လူတှထေဲက တဈယောကျ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
စိတျမေ ကာငျးစရာပါပဲ။ အဲလိုဆိုရငျေ တာ့ မှားနပေါပွီ။ နောကျတဈကွိမျ “ ငါ့ဘဝကိုငါ မုနျးတယျ ” လို့ ပွောတဲ့အခါ သငျ့ကို ယျသငျ မေးကွညျ့ပါဦး။ ဒါဆို ငါသရေငျ ပိုကောငျးမ လား-လို့။ ဒီစကားက ကွမျးတမျးခငျြ ကွမျးတမျးလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ တှေးရုံေ လးပဲ တှေးကွညျ့လိုကျပါ။ သငျအသကျရှ ငျနသေမြှ သငျဟာ ပြျောရှငျနို ငျပါတယျ။ ပွီးတော့ ဘဝကို ပိုကောငျးအောငျ လုပျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး လညျး အမွဲတမျး ရှိပါတယျ။
၁။ ဘဝရဲ့ ကောငျးတဲ့အ ရာတှအေပျေါမှာ အာရုံစိုကျလိုကျပါ
ဘဝနဲ့ပတျသကျလို့ ကောငျးတဲ့ အရာတှကေို တဈခုမှ မစဉျးစားနိုငျ ဘူးဆိုရငျတော့ သငျ့မှာ အဆိုးမွငျအတှေးတှေ ရှိနဆေဲပဲ။ အဲဒီအေ တှးတှကေို ထှကျသှား ခှငျ့ ပေးလိုကျပါ။ သငျ့ ဘဝရဲ့ ဘယျအရာတှကေို သငျ တကယျမွတျနိုးသလဲ?
ဘဝကို သငျမခဈြဘူးဆိုရ ငျတောငျမှ အဲဒါကို တဈခြိနျလုံး ပွောနဖေို့မ လိုပါဘူး။ သငျ့ဘဝကိုသငျ မခဈြဘူးလို့ ပွောလလေေ၊ အဲဒီ အနှုတျ လက်ခဏာ အတှေးတှကေ ပိုအားကော ငျးလာေ လလပေါပဲ။
သငျ့ရဲ့ဘဝဟာ တခွားတဈယော ကျယောကျ ရဲ့ဘဝနဲ့ ဘယျတော့မှ တဈသမတျ တညျး မတူနိုငျပါဘူး။ ကိုယျ မတတျနိုငျတဲ့ အဝတျအစား ဝတျတဲ့သူတှေ၊ ကိုယျမစီးနိုငျတဲ့ကား စီးတဲ့သူတှေ၊ ကိုယျမနနေိုငျတဲ့ အိမျမြိုးမှာ နသေူတှကေတော့ ကိုယျ့အနားမှာ အမွဲတမျး ရှိနမှောပါပဲ။
ဒါကို ကငျြ့သားရေ အာငျလုပျပါ။ နသေားကြ သှားပွီဆိုရငျတော့ ဘာမှ ပွဿနာ မရှိတော့ပါဘူး။ တခွားတဈယောကျယောကျရဲ့ အောငျမွငျမှု ကို သငျ့ကိုယျပိုငျ အောငျမွငျမှု ရရှိဖို့အတှ ကျ တှနျးအား တဈခုအဖွဈ အသုံး ခနြိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သငျ့မှာမရှိတဲ့ အရာတှေ အတှကျတော့ ဘယျတော့မှ စိတျမေ ကာငျးမဖွဈပါနဲ့။
၄။ သငျတကယျ ခဈြမွတျနိုးတဲ့ အရာတှေ ကို ပိုလုပျပါ။
သငျ့ကို ပြျောရှငျစမေယျ့ အလုပျတဈ ခုခုကို အနညျးဆုံး တဈခုလောကျဖွဈဖွဈ နတေို့ငျးလုပျပါ။
၅။ ဘဝဟာ အမွဲတမျးွေ ပာငျးလဲနတေယျဆိုတာ အသိအမှတျပွုပါ။
သငျ့မှာ အလုပျကောငျးကောငျး မရလို့၊ ဒါမှမဟုတျ ငှရေေးကွေးရေးက သငျမြှျောမှနျးထားသလကျေ အဆငျမပွလေို့ စိတျဓာတျကနြတေယျ ဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ လကျရှိအခွေ အနဟော အခွအေနေ တဈခုမြှသာဖွဈတယျလို့ လကျခံပါ။ အရာအားလုံးဟာ ပွောငျးလဲကွပါတယျ။
သငျ အမွဲပေါငျးသငျးေ နတဲ့သူတှနေဲ့ ပတျသ ကျလို့ ဂရုစိုကျပါ။ ပြျောရှငျတဲ့သူတှေ၊ အကောငျးမွငျတတျသူတှနေဲ့ ပေါငျးသ ငျးမယျဆိုရငျ သငျလညျး ပိုပွီးပြျောရှငျလာ ပါလိမျ့မယျ။
အကယျ၍ သငျ့အပေါငျးအ သငျးတှဟော အဆိုးမွငျ တတျသူတှေ ဖွဈနမေ ယျဆိုရငျတော့ အဲဒီအတှေးတှဟော သငျ့ကိုလညျး လှမျးမိုးလာနိုငျ တယျဆိုတာ ဂရုပွုပါ။
အခွားသူေ တှကို မြားမြားကူညီလေ၊ သငျ့ရဲ့ဘဝနဲ့ပ တျသကျလို့ ညညျးတှားနဖေို့ အခြိနျမရလပေါပဲ။ ဒါတငျမကပါဘူး၊ လူတှကေို ကူညီခွငျးက သငျ့ကို တကယျပဲ ပြျောရှငျစနေိုငျပါတယျ။
ကွျောငွာတှေ ရဲ့အလုပျက – သငျ့ဘဝ ဟာ မပွညျ့စုံဘူး၊ ဒါပမေဲ့ အဲဒါကို ကောငျးမှနျအောငျ ပွုလုပျနိုငျတယျ၊ အဲလိုပွုလုပျဖို့ သူတို့ရဲ့ နောကျဆုံးေ ပျါ အဝတျအစားတှေ၊ အသုံးအဆောငျတှေ၊ ကားတှကေို ဝယျရမယျလို့ သငျ့ကို ပွောဖို့ပါပဲ။ အဲဒီအလိမျ အညာတှကေို လကျမခံမိပါစနေဲ့။
၉။ သေးငယျတဲ့ အရာလေးေ တှအပျေါမှာ တနျဖိုးထားတတျလာပါစေ။
ဘဘာဝလော ကကွီးကို အသေ အခြာ ကွညျ့ဖူးပါသလား။ မိုးကောငျးကငျ ၊ တိရစ်တာနျလေးတှေ၊ အပငျတှနေဲ့ မွဈခြောငျးတှေ။ဒါတှဟော တကယျကို လှပပါတယျ။ အဲဒါတှကေို ရှာဖှကွေညျ့ပါ။ ပွီးတော့ ဘဝကို သူ့အရှိအတိုငျး ခဈြမွတျနိုးတတျအောငျ သငျယူပါ။
၁၀။ ဘဝရဲ့သာ ယာပြျောရှငျမှုတှေ၊ အခှငျ့အရေးတှကေို ရယူပါ။
အခု သငျ့မှာ အခှငျ့အရေးရှိပါသေးတယျ- ဘဝရဲ့ကောငျးတဲ့ အရာတှကေို ရှာဖှပေါ၊ ပြျောရှငျပါ၊ ပွီးတော့ ဘဝကို ခဈြမွတျနိုးပါ။ Credit
“လက်ရှိ ကိုယ့် ဘဝကို အားမရလို့ စိတ်ကုန်နေတဲ့ အခါ ဒီပို့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ”……. ကိုယ့်ဘ ဝကိုယ် ချစ်ခင် လာဖို့ နည်းလမ်း (၁၀) ခု
သူ တို့ဘဝကိုသူတို့ မုန်းတ ယ်ဆိုတဲ့လူေ တွ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာရှိေ နတဲ့အရာေ တွနဲ့ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါဘူး။အကယ်၍ သင်လ ည်း အဲလိုပဲ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ- ချမ်းသာမှ၊ အောင်မြင်မှ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ အများကြီးရမှ၊ နာမည်ေ ကျာ်ကြားမှ၊ ပြီးပြ ည့်စုံတဲ့ မိသားစုရှိမှ ပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
စိတ်မေ ကာင်းစရာပါပဲ။ အဲလိုဆိုရင်ေ တာ့ မှားနေပါပြီ။ နောက်တစ်ကြိမ် “ ငါ့ဘဝကိုငါ မုန်းတယ် ” လို့ ပြောတဲ့အခါ သင့်ကို ယ်သင် မေးကြည့်ပါဦး။ ဒါဆို ငါသေရင် ပိုကောင်းမ လား-လို့။ ဒီစကားက ကြမ်းတမ်းချင် ကြမ်းတမ်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တွေးရုံေ လးပဲ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ သင်အသက်ရှ င်နေသမျှ သင်ဟာ ပျော်ရွှင်နို င်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘဝကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး လည်း အမြဲတမ်း ရှိပါတယ်။
၁။ ဘဝရဲ့ ကောင်းတဲ့အ ရာတွေအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်လိုက်ပါ
ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ ကောင်းတဲ့ အရာတွေကို တစ်ခုမှ မစဉ်းစားနိုင် ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်မှာ အဆိုးမြင်အတွေးတွေ ရှိနေဆဲပဲ။ အဲဒီအေ တွးတွေကို ထွက်သွား ခွင့် ပေးလိုက်ပါ။ သင့် ဘဝရဲ့ ဘယ်အရာတွေကို သင် တကယ်မြတ်နိုးသလဲ?
ဘဝကို သင်မချစ်ဘူးဆိုရ င်တောင်မှ အဲဒါကို တစ်ချိန်လုံး ပြောနေဖို့မ လိုပါဘူး။ သင့်ဘဝကိုသင် မချစ်ဘူးလို့ ပြောလေလေ၊ အဲဒီ အနှုတ် လက္ခဏာ အတွေးတွေက ပိုအားကော င်းလာေ လလေပါပဲ။
၃။ သင့်ရဲ့ဘဝကို အခြားသူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့
သင့်ရဲ့ဘဝဟာ တခြားတစ်ယော က်ယောက် ရဲ့ဘဝနဲ့ ဘယ်တော့မှ တစ်သမတ် တည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ် မတတ်နိုင်တဲ့ အဝတ်အစား ဝတ်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မစီးနိုင်တဲ့ကား စီးတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မနေနိုင်တဲ့ အိမ်မျိုးမှာ နေသူတွေကတော့ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါပဲ။
ဒါကို ကျင့်သားရေ အာင်လုပ်ပါ။ နေသားကျ သွားပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှ ပြဿနာ မရှိတော့ပါဘူး။ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှု ကို သင့်ကိုယ်ပိုင် အောင်မြင်မှု ရရှိဖို့အတွ က် တွန်းအား တစ်ခုအဖြစ် အသုံး ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်မှာမရှိတဲ့ အရာတွေ အတွက်တော့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မေ ကာင်းမဖြစ်ပါနဲ့။
၄။ သင်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အရာတွေ ကို ပိုလုပ်ပါ။
သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေမယ့် အလုပ်တစ် ခုခုကို အနည်းဆုံး တစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ် နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။
၅။ ဘဝဟာ အမြဲတမ်းြေ ပာင်းလဲနေတယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပါ။
သင့်မှာ အလုပ်ကောင်းကောင်း မရလို့၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးက သင်မျှော်မှန်းထားသလေက် အဆင်မပြေလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ် ဆိုရင် သင့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေ အနေဟာ အခြေအနေ တစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်လို့ လက်ခံပါ။ အရာအားလုံးဟာ ပြောင်းလဲကြပါတယ်။
သင် အမြဲပေါင်းသင်းေ နတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သ က်လို့ ဂရုစိုက်ပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေ၊ အကောင်းမြင်တတ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသ င်းမယ်ဆိုရင် သင်လည်း ပိုပြီးပျော်ရွှင်လာ ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင့်အပေါင်းအ သင်းတွေဟာ အဆိုးမြင် တတ်သူတွေ ဖြစ်နေမ ယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအတွေးတွေဟာ သင့်ကိုလည်း လွှမ်းမိုးလာနိုင် တယ်ဆိုတာ ဂရုပြုပါ။
အခြားသူေ တွကို များများကူညီလေ၊ သင့်ရဲ့ဘဝနဲ့ပ တ်သက်လို့ ညည်းတွားနေဖို့ အချိန်မရလေပါပဲ။ ဒါတင်မကပါဘူး၊ လူတွေကို ကူညီခြင်းက သင့်ကို တကယ်ပဲ ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။
၈။ TV သိပ်မကြည့်ပါနဲ့။
ကြော်ငြာတွေ ရဲ့အလုပ်က – သင့်ဘဝ ဟာ မပြည့်စုံဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တယ်၊ အဲလိုပြုလုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးေ ပါ် အဝတ်အစားတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ၊ ကားတွေကို ဝယ်ရမယ်လို့ သင့်ကို ပြောဖို့ပါပဲ။ အဲဒီအလိမ် အညာတွေကို လက်မခံမိပါစေနဲ့။
၉။ သေးငယ်တဲ့ အရာလေးေ တွအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားတတ်လာပါစေ။
ဘဘာဝလော ကကြီးကို အသေ အချာ ကြည့်ဖူးပါသလား။ မိုးကောင်းကင် ၊ တိရစ္တာန်လေးတွေ၊ အပင်တွေနဲ့ မြစ်ချောင်းတွေ။ဒါတွေဟာ တကယ်ကို လှပပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ဘဝကို သူ့အရှိအတိုင်း ချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင် သင်ယူပါ။
၁၀။ ဘဝရဲ့သာ ယာပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေကို ရယူပါ။
အခု သင့်မှာ အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်- ဘဝရဲ့ကောင်းတဲ့ အရာတွေကို ရှာဖွေပါ၊ ပျော်ရွှင်ပါ၊ ပြီးတော့ ဘဝကို ချစ်မြတ်နိုးပါ။ Credit
Previous post မိမိတို့ အနီးပတျဝနျးကငျြက WiFi လိုငျးကို နှောငျ့နှေးစတေဲ့ အိမျသုံးပစ်စညျး (၈) မြိုး
Next post သူမခဈြသူနဲ့ ဒီကနမေ့နကျမှာ မင်ျဂလာလကျမှတျရေးထိုးပှဲလေးကငျြးပပွီး ပရိသတျကို အသိပေးလိုကျတဲ့ တေးသံရှငျယှနျးမွတျသူ